Maxaa sababa in caruurta soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee ka dhaca iskuulada - NorSom News
Waxaa isbuucan inagu soo aadan dib u furmaya inta badan iskuulada sare Norwey. Sida aan wada ognahay iskuulada sare ee Norwey waxay u qaybsamaan labo qaybood oo kala ah qaybta farsamada gacanta(yrkesfag) iyo qaybta tacliinta maadiga ah(studiespesialisering). Ku dhawaad 65%(xigasho SSB) ardada soomaalida ah ee dhigata dugsiga sare, gaar ahaan wiilashu waxay dhigtaan qaybta farmasada gacanta, nasiib xumase intooda badan caruurta soomaalida ah ee ka baxda iskuulka farsamada ma helaan lærlingplass oo ah goob shaqo oo ay farsamadii ay iskuulka ku barteen ay kana shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa cad in waalidiinta soomaalidu badanaa aysan xog iyo macluumaad fiican ka haynin qaabka uu u shaqeeyo iskuulka farsamada gacanta, taas oo keenayso in aysan talooyin iyo warbixino ka siin karin ubadkooda.
Sababaha arintaas keeno iyo guud ahaan qaabka uu shaqeeyo iskuulka farmasada gacanta ayaan wax ka weydiinay Eng. Asad Qaasim oo ah macalin farsamada gacanta, gaar ahaan Elektro, Data & Elektronikksystemer ka dhiga iskuul kuyaalo magaalada Drammen. Asad ayaa sheegay in: In soomaalidu guud ahaan aysan ku qanacsaneyn qaabka uu dugsiga sare qaybtiisa farmasada, iyo sida uu shaqeeyaba.
Dadka qaarkood, gaar ahaana waaalidiinta waxeey leeyihiin in Yrkesfagka (iskuulka farsamada gacanta) uusan u fiicneen ilmahooda, maadaama aysan dhalinyaradu helin lærlingsplass, marka ay dhameeyaan waxbarashada dugsiga sare.
Waa sax oo ay wey dhacdaa in mar marka qaar in ay caruurtu helin «læringsplass» sababtoo ah Læringsplasska waxaa bixiya shirkado private ah(gaar loo leeyahay) oo dowladu shaqo kumalahan. Shirkadahana waxa ay intabadan boosaska læringsplasska siiyaan dadka ay yaqaanaan caruurtooda, sidaas darteed lærlingplassku waxaa inta badan lagu helaa (Nettverk gjennom familien).
Laakiinse sanadihii la soo dhaafay waxaa aad u kordhay dood iyo dacwado badan oo ku saabsan in guud ahaan caruurta ajnabiga ahi aysan helin læringsplass, sidaa darteedna waxaa hada Fylkeskommune/gobolwalbo qasab looga dhigay in arday kasta oo heysta darajo fiican «bra karakter», maqnaanshihiisana uu yar yahay «lite fravær» la siiyo lærlingplass.
Khatarka maqnaanshaha ardeyda ee iskuulka.
Ka dib sanado badan oo aan macalin ka ahay Dugsiga sare qeybtiisa Yrkesfag/Farsamada gacanta, waxaa ii soo baxday in inta badan caruurta soomaalida aysan ka warqabaqin ama aysan fahansaneyn qatarta uu leeyahay «Fravær» ama in iskuulka laga maqnaado cudurdaar la,aan. Hadii uu maqnaanshahaada bato shirkad ku qaadaneyso oo haba yaraatee læringsplass ku siineeyso ma jirto. shirkadaha waxaa ka dhaadhacsan oo ay aaminsanyihiin, in hadii uu ardayga kamaqnaa inbadan iskoolka, uu hadhowna ka maqnaan doono shaqada shirkada.
Asad ayaa aaminsan in waalidiinta soomaalida ay doorka ugu weyn ka ciyaari karaan sidii ubadkooda ay sifiican ugu dhamaystiran lahaayeen dugsiga sare, gaar ahaan qaybta farsamada gacanta.
Waxaan kula talin lahaa in waalidiinta soomaalidu ay ku dadaalaan sidii ay xooga u saari lahaayeen in caruurtooda ay iskuulka tagaan oo aysan ka maqnaan cudur-daar la aan, ayna u kuur galaan oo la socdaan sida uu yahay xaalkooda iskuulka.
Waalidiinta waa furaha caruurta ay ku gaari karaan horumar xagwalba ah, marka waalidiinta soomaaliyeed meelwalbo ha joogaane waa in ay ku dadaalaan sidii ay ubadkooda ugu noqon noqon lahaayeen (Forbilde), tusaale fiican oo lagu daydo.
Waa in waalidiinta ay xiriir toos ah la lahaadaan iskuulka, ayna tagaan markii loogu yeero iskuulka, si xaalka ilmahooda looga wada hadlo.
Waalidku waa inay tusiyaan caruurta in waxbarashada ay tahay sheyga ugu wanaagsan uu wadanka kaqaadan karo, mustaqbalna ku dhisan karaan.
Ilmaha waa in la siiyaa awood ay ku doortaan wax alle iyo wixii ay rabaan in ay bartaan, maxaa yeelay soomaalidii oo dhan aqoon waxeey u fahmeen oo kaliya in Doctor/lege, advokat, ingeniør, oo culuumta kale uma xisaabsana inay wax tarto.
Waalidiinta kuwa raga ah waa in aay ciyaalkooda waqti la qaataan oo aay la saaxiibaan, tusiyaana in caruurtu ay yihiin kuwo daadaalaaya oo shaqo fiican haya.fi
Ugu danbeyn Asad oo ah macalin aqoon fiican u leh xaalada caruurta soomaalida ee iskuulada farsamada gacanta ayaa ka codsaday waalidiinta soomaalida inay taxadar gooni ah ay u yeeshaan arintan, maadaama ay caruurta soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee ka dhaca iskuulada sare ee Norwey. Isago oo ku booriyay in ubadka laga dhaadhiciyo in aqoontu ay tahay furaha mustaqbalka dhow iyo kan dheerba. Asad ayaa sidoo kale sheegay in wadankan hada ay wax walbe aqoon iyo shaqo walbe qofka lagu xiro inuu ugu yaraan leeyahay aqoon dugsi sare.
Previous articleMa ogtahay in gabar soomaali ah ay hogaamiso ururka riwaayadaha iyo masrixiyada Norwey oo dhan
Next articleGabar soomaali ah oo ganacsi guulaystay ka hirgalisay Hammerfest, iyo amaan loo soo jeediyay